Amangcwaba eencwadi ezilibalekileyo: Umsebenzi wobugcisa kaZafon | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 19/07/2021 19:10 | Iincwadi, Iincwadi, Inoveli
Amangcwaba eencwadi ezilibalekileyo Yitetralogy ebhalwe nguCarlos Ruiz Zafón waseBarcelona. Olu luhlu lububungcibi bombhali, oluye lwaba yinto yokuhlela kwiincwadi zeSpanish zangekhulu lama-XNUMX. Umbhali udale amabali amane ahlelwe kakuhle kwaye azimeleyo, nganye inezinto zayo, kodwa ekugqibeleni inxibelelene.
Iziza zidlula kwiimfihlakalo ezahlukeneyo ezijikeleze izizukulwana ezintathu zosapho lakwaSempere kunye nendawo yokugcina iincwadi. Ukwengeza, Uphuhliso lwenoveli nganye lubandakanya incwadi enigmatic ebeka isantya sebali. Yonke into incediswa ngabalinganiswa abangenakulibaleka abacebisa i-labyrinth yeentsomi kunye nokuthandabuza okwenziwe ngumbhali.
1 ITetralogy Amangcwaba eencwadi ezilityelweyo
1.2 Umdlalo weengelosi (2008)
1.3 Ibanjwa laseZulwini (2011)
1.4 I-Labyrinth yeMimoya (2016)
Kwi 2001, Ruiz UZafón waqala olu ngcelele lweenoveli ezinqabileyo, ezomlingo wazo waqala ngokuziswa ngempumelelo kwe Isithunzi somoya. Incwadi yakhawuleza yoyisa izigidi zabafundi, iqala le nto yaziwa njenge: "zafonmanía". Kweli nqanaba lokuqala, umlinganiswa ophambili kunye notata wakhe bavula iminyango kwindawo engaqondakaliyo nengakholelekiyo: Amangcwaba eencwadi ezilityelweyo.
Ke ngo-2008 umbhali wathi thaca Umdlalo wengelosi, umsebenzi owaphula irekhodi kwivenkile eyayithengiswa eSpain, ngaphezu kweekopi ezisisigidi. Kwiminyaka emithathu kamva, Ibanjwa laseZulwini (2011) ujoyine ingqokelela. 2016 Isahluko sokugqibela siza kufika nge Ilebyrinth yemimoya. Kule inoveli yamva nje, zonke iziqwenga zephazili ezicetyiswe ngumbhali xa wayedala isaga ziyahlangana.
Ityala leTetralogy La ...
Yimfihlelo ye-gothic kunye nenoveli yamabali, apho umbhali avula khona uthotho lweencwadi. Ibali liyenzeka kwisixeko saseBarcelona ukusukela ngonyaka we-1945, kwaye ophambili kuyo nguDaniel Sempere. Ubomi balo mfana butshintshwa xa, enkosi kuyise, eyazi amangcwaba eencwadi ezilityelweyo kwaye athathe isigqibo sokukhetha isicatshulwa Isithunzi somoyanguJulián Carax.
Ukutsalwa libali- kunye nokufuna ukufunda ngakumbi iCarax-, UDaniel uqala uphando oluza kujoyina umhlobo wakhe omtsha uFermín. Ukukhangela kubakhokelela kwiindlela ezingalindelekanga, kwaye njengoko beqhubela phambili bafumana ulwazi olunomdla oluvela kumbhali. Phakathi kwezi, kwavela isiqendu esimnyama kunye noPenelope Aldaya, esabangela ukuba le ndoda ibe ngumntu omnyama nolilolo.
Njengoko siqhubeka nemibuzo, ubomi babantu abatsha buqala ukuba semngciphekweni. Kodwa, akukho nto imisa umoya kaDaniel owayengoyiki kunye neqabane lakhe elithembekileyo, elathi abaphumli de bacacise yonke imfihlelo ejikeleze uJulián. Yiyo loo nto idlula iyelenqe elijikelezwe yinyani kunye nefantasy, kunye nomxube we-ins kunye nokuphuma, ukubulala, ukuthandana okungavumelekanga kunye nobuhlobo.
Yintsumantsumane inoveli eyoyikisayo eyenzeka kwiBarcelona ye-20s. Ibali elinomdla linombhali ophambili walo njengombhali uDavid Martín. Kule thuba, URuiz Zafón wadala iyelenqe elahlukileyo kwincwadi yokuqala, kodwa ngengxelo eshinyeneyo neyenziwe kakuhle ezigcina umfundi egxile kumlingo nakwinkxalabo.
Iyelenqe lenzeka kunye noDavid ekhumbula Ubuntwana bakhe obuhlungu, ngelixa bekhumbula impumelelo yomsebenzi wakhe IsiXeko esiGwetyiweyo, awayeyipapasha kwiphephandaba elidumileyo laseBarcelona. Umlinganiswa ophambili ubalisa ngendlela akuba ekwenzile ngayo ukwamkelwa, usiya kwindlu eshiyekileyo kwaye Dibana noCristina (ukuthanda kwakhe izinto). Kule ndawo intsha, wabhala eminye imibhalo-kubandakanya eyakhe incwadi-, wagqiba kwelokuba akhokele ubomi bakhe kwaye athathe isigqibo sokutshata le ntombazana intle.
Nangona kunjalo,, ngenxa yokudana okwahlukileyo, akukho nto ihamba njengoko bekucwangcisiwe. Phakathi kokuphoxeka, enye ye CristinaNgubani unomnye umntu. Kwakhona, incwadi yakhe entsha fiasco, yUkongeza isithuko ekwenzakaleni, ufunda oko unengxaki enkulu yempilo.
Ngexesha lokudakumba kwakho, UDavid wanxibelelana noAndreas Corelli, umlinganiswa oyindida ikunika ntoni isixa esikhulu se imali kunye nokuphiliswa kwayo ukutshintshiselana bhala incwadi kwimfundiso entsha yenkolo. Ukususela ngoko, maelstrom iziganeko ezoyikekayo kuchaphazela ubomi umbhali.
Phakathi kwamashwa amatsha, uMartín uqala ukuphanda, njengoko ecinga ukuba bonke ububi bunxulumene nokuthunyelwa kombhalo omnyama. Abantu abaliqela baya kungenelela kule ndlela, njengomthengisi weencwadi uSempere kunye nomncedisi wakhe onengqiqo, u-Isabella. Yonke imicimbi ikhokelela kuDavid kwincwadi ULux Aterna, Ibhalwe ngumnini wendlu endala apho ahlala khona, Mnu. Marlasca.
Umdlalo weengelosi / i ...
Ibali eligcwele ukurhanela kunye nobuqhetseba, apho abalinganiswa abaphambili bebali babuyela phambili, abanjengo: Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres, David Martín no Isabella Gispert. Ukwengeza, umbhali utyhila ezinye zezinto ezazingaziwa ngaphambili ezazishiya abafundi bengaqinisekanga.
Iminyaka eliqela idlulile, UDaniel uyile Usapho kunye nomfazi wakhe uBea noJulian omncinci. Ngelo xesha, usebenza notata wakhe kwaye umhlobo wakhe UFermin (ophambili kwisiqwenga somxholo) kwivenkile yosapho: uSempere noonyana. Indawo ayisiyiyo kwaphela, ke, uDaniel uyavuya xa umthengi enomdla kakhulu kwincwadi enexabiso elibizayo: Ubalo lweMonte Cristo.
Nangona kunjalo, uchulumanco kungekudala luye lwaphela, njengoko le ndoda imbi ithatha incwadi kwaye ibeka inqaku: "KuFermín Romero de Torres, owabuya kwabafileyo kwaye enesitshixo sekamva." Akuba emkile umntu angamaziyo, uDaniel uhamba nomhlobo wakhe ukuya kumxelela ngokwenzekileyo. Ngenxa, UFermín ubaxelela malunga nexesha lakhe elidlulileyo kwaye utyhila imfihlo eyoyikisayo.
Ngelo xesha, ibali lihamba iminyaka emva, xa uFermín xesha Ibanjwa kwinqaba yasemkhosini yaseMontjüic y Dibana noDavid Martín. Kule ndawo kukho uMauricio Valls -umlawuli weentolongo kunye nombhali onomdla-, osongela uMartín kwaye asebenzise ubuchule bakhe. Ukusuka apho ubuhlobo phakathi kukaFermín noDavid bazalwa, kwaye owokugqibela umabela umsebenzi obalulekileyo obandakanya uDaniel Sempere.
Ibanjwa laseZulwini ...
Kukuhanjiswa okuvala umjikelo weenoveli ezijikeleze indalo iphela Amangcwaba eencwadi ezilibalekileyo. Ngokuphathelene noku, URuiz Zafón uthe: “… le yokugqibela ndiyithandayo, mhlawumbi kungenxa yokuba sisiqwenga selaphu, eyongeza onke amanqaku aphakanyiswe ngaphambili ”. Kwaye, yeyona ncwadi inde neyona igqibelele kuyo yonke i-saga, enamaphepha angama-900 ewonke.
UAlice Grey ngumfazi okwiminyaka engamashumi amabini ukhumbula ngokungathandabuzekiyo ubuntwana bakhe, kwaye njani wasinda uhlaselo olubi luka Imfazwe yamakhaya yaseSpain. Ngu-1958, kwaye eli bhinqa liselula linobukrwada lifuna ukuthatha umhlala-phantsi emsebenzini, emva kweminyaka elishumi yokuba ngumcuphi wamapolisa afihlakeleyo eMadrid. Kodwa ngaphambili funeka yenza umsebenzi wokugqibela: buza ekunyameni kweMauricio Valls, umphathiswa worhulumente kaFranco.
UAlicia wenza uphando kunye noCaptain Vargas, ugxa wakhe. Xa bejonga iofisi yabalahlekileyo, bafumana incwadi ebhalwe nguVíctor Mataix. Kungekudala, bayayinxulumanisa nexesha apho iiValls zayalela iMontjüic-indawo apho abanye ababhali, kubandakanya nalo mbhali, babevalelwe khona. Iiarhente zilandela umkhondo wale mzila kwaye ziye e-Barcelona ukuphanda abathengisi beencwadi, phakathi kwabo nguJuan Sempere.
Njengokuba uAlicia eqhubela phambili kuphando, ufumanisa ubuxoki, ukuxhwila kunye nolwaphulo-mthetho by yolawulo lukaFranco. Emva kokungena kuloo nqwaba yorhwaphilizo, baphantsi kweengozi ezinkulu, kodwa bayakwazi ukubaleka bengonzakalanga. Yonke inombulelo kwinto yokuba uAlicia wayenenkxaso yabantu ababalulekileyo, phakathi kwabo uDaniel noFermín babalasele. UJulian Sempere omncinci naye wadlala indima ebalulekileyo, enyanisweni, uphela sele engundoqo kwisiphumo sebali.
ILabyrinth ye ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Amangcwaba eencwadi ezilibalekileyo